600 Deg Deg Daawo:Oromadii Xamar Daganeed oo Dalbatay in Lasiiyo Meeqaam, | khaatumo news online
Deg Deg Daawo:Oromadii Xamar Daganeed oo Dalbatay in Lasiiyo Meeqaam,
Jul 5, 2020 - 8 Aragtiyood
Qowmiyadda Oromada ah ee ku nool magaaladda Muqdisho ayaa dalbaday in ay xaquuqdooda Matalaad ka helaan Gobalka Banaadir.
Qaar kamid ah madaxda Qowmiyadda ayaa sheegay inanay macquul aheyn 40 sanno oo xuquuq la’aan ah, waxeyna tiradooda ku sheegeen 30,000 oo Qoys
Inaga waxay ila tahay in shacii ama xeer aan cidna ka sareen wadankan loo sameeyo aduunka umadaha Ku nool sharci baa kala wada walaa oroman cid wax yeelen walaa somali baan shisheeye u shaqaynayn hadii sharci jiro wadankaa maraykan 300,000 million baa ku nool oo aduunko dhan ka kala yimid cidna sharciga kama sarayso marka farmaajo iyo dowladiisa wadankan waa in sharciga la dhamaystira,si nimankan wadanka goosgoostay sharciga loola tiigsado.
isixaaqa la sheegayaa miyaanu ahayn ina bucurbacayr
Qaran kiciye says:
Maxaa ku baxay? In Oromo la Somaaliyeey la wareegi doonto Somaliya mustabalka. Waa arrin khatarteeda leh maanta waa 30000, mustaqbalka 30 milyan ayey noqon doonaan..
Xagaroow saaxiib waxa naga dhin,waad is fooladeysey.
Ninbaa yidhi,ninyahoow dhubuqdhuqdaada mooyee, dhul u dgacaaya hubso.
Markaan soo baadhay Foolad, waxa la ii sheegay xaflad loo sameeyo qofka la qiimaynayo, yacnii soo dhaween Somalidii qarnigii 19-20 naad u haajirey Yemen, ayaa dalka la yimaad. Dayib yaa Cadmaawi, calaashaan foolada, qof aan reer Cadmeed ahayn garan maayo. Laakiin maan fahmin waxaan ku fududaaday ee aad maahmaahda sal fududeydka iigu soo hal qabatay. Waxaan naqdiyey mashruuca danleeyda, ee hadda isa siiyey dalkii inay keligood ku nool yihiin, lana baxay saamileyda, albaab walba markii Somalidu ku fahantay bay tan Caasimad Oromayntana keeneen, waa la naqdinayaa 100%
SOOMAALIYEEY TOOS TOOSO ISKU TOORSADA
HADA BA KIINA TAAGDARANEEEY TAAGEERA WELIGIIIN……….
Toosiniyo tilmaamid xaq; Bismillaah
Allaah Kariim, Somalidu waxay odhan jireen, “nin aan gole joog ahayn ama rag qaabili jirin yaanu inoo-talin/inoo-arrimin”, waa tan maanta dhacday oo kale. Somaliya, 3o sanadood oo dagaal sokeeye ayay soo martay, oo waxa ka adeegtay Mukhaabaraat shisheeye oo ku xidhnaa meelo shishe, oo dalka danno ka lahaa, reer reerna u kala saaray, wadaadadii Somaliyeed xitaa inooma baxsan, waxa ku adeegtay mukhaabaraatkii (Sucuudiga iyo Jabuuti ilaa haddana wada taariikhaha kicinta, been abuurida iyo isku kabkabka hayb jinni iyo dad is nacsiinta). Sidoo kale siyaasi ku sheegyadii iyo tuugadiina waxa iyana ka adeegtay mukhabaraatyo ajnebi. Somaliya, iyadoo isku dhan gees ilaa gees shacabkeedii dhulka ayaa lagu riday oo lagu xabaalay. Haddaba, Inta Somalidu ka soo noqonayso, dalkeena cidi inalama laha, ama marti ceeb yar bay ahaan ama wey iska guuri.
Guud ahaan, Shacabkii Somalida, waxa ku batay dad waayo aragnimadoodu/ogaalkoodu yar yahay dabinkana si sahalan ugu dhaca. Maanta Caasimadii, waxa ka dhawaaqay/qalaaday Farole raggiisii u jooggay Caasimada ee watay siyaasada guracan ee qabiil afuufka ku dhisanyd, oo muusig cusub keenay, Oromaa Xamar wax ku leh, magaalooyin Somali ahna ugu hanjebey/goodiyey inay rarayaan dalkana ka saarayaan, waar Faroole iyo kooxdiisa aaran jinni khaladkooda ma ummad dhan baa loo buufinayaa. Adeeg Allaah.
Kushitigga la sheego, waa marka laga tago qomiyada Somali, iyaguna ay ka yimaadaan qomiyada Oromo. Laakiin, dadkan maanta idiin yeedhay, waxay u badnaayeen ama ahayeen dad lagu soo dhex darsaday dalka, oo shaqo u jooggay. Askartii koofyad dhuubta ahayd xilligii Xayle salase ee basaasnimada loo keenay dalka, hadday inala xidideen oo inagana shaqaysteen, ma dalkay inala yeelanayaan, jawaabtu waa maya. Abgaalow hadday run tahay oo ay idinla xidideen, odayadii gabdhaha dhalay caruurtu ha ku ab tirsadaan sida reer qardho ku sameeyeen dadkii soo dhex deggey qarnigii 18naad.
Taariikhda dib u raaca, ilaa sebenkii wiilwaal ilaa hadda la ism bixiyo. Waxa ugu danbeeyey jaadlayaashii Isaaqa iyo shacabkii Geriga iyo Ciise-hii ee ay dhamaantood baangada madax uga gureen Oromadu, yacnii waa Somali, xitaa waxa socotay siyaasadii heegada ee isku sidkaneed Tigre+Cabdi iley iyo Oromada ee Ethiopian-nimada ahayd. Ogow, Abti Abgaal wuxuu bixin waayey reer Diinigii Mareexaan oo bah Dalandoole hooyadood ahayd, sidoo kale Xawaadle Daara Mudulood ayay ku Hawiyooween. Mareexaan-na ilaa hadda waa tuug Daarood markaad si hoose isu xansataan dhexdiina. Dawladii Siyaad Barre 22 October laqabkaas beysiteen Abgaal, dalka oo dhan iyagaa heystey.
Annagu haddaan reer SSC nahay doon kumaanan iman, Daaroodkaa la sheegana waa nalagu daraa marka dan dad wataan naloo keenayo ama Somali nalaga saarayo, yacnii shaqada mukhaabaraatka ajinebiga. Laakiin. Waxaanu nahay Somali dhaba, habeen iyo maalin shacabkayagu waxay u taagan yihiin Somali raadinteed, waana fitro shaqwsiyan ku wada abuuran ciroole iyo caruurba, dan, macaash iyo faaiido gaara kuma dalbano, waa waajib muqadasa Somalinimada iyo dalka inaga wada dhexeeya. Dawladii, C/qaasim, tii C/lahi Yusuf xitaa maxkamadihii, sidoo kale Shariif sheekh tiisii intaba dusha ayay ku siteen reer SSC bilaa shuruud. WBT
OO HAWIYE HABAYAC MA OROMAA? !.
BILAAYAA IRIR SAMAALE NOQOTA
@ SHEEKH ISAXAAQ.COM